Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukuhamba ngeshishini » Iindawo eziphezulu ezili-10 ezisebenzela abantu abazimeleyo ehlabathini
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Education • ukonwatyiswa • iindaba • abantu • Xanduva • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Iindawo eziphezulu ezili-10 ezisebenzela abantu abazimeleyo ehlabathini.
Njengoko ukuveliswa kwedijithali kuyitshintsha indlela esisebenza ngayo, iiyure eziqhelekileyo zeofisi ziba yinto yakudala.
IJapan lelona lizwe libi kakhulu kubantu abazimeleyo, kunye neFreelancer Score ye-3.99/10 nje. Oku kubangelwe ikakhulu kukungasebenzi kakuhle kakhulu malunga nokukhangela umsebenzi ozimeleyo, amandla aphantsi wamalungelo asemthethweni wabasebenzi, kunye nokusebenza kakubi kwiGlobal Gender Gap Index.
I-Singapore lilizwe elinesantya esiphezulu se-intanethi kwi-256.03 Mbps.
I-Netherlands inomdla kakhulu kuma-freelancers ngophendlo lwe-1,305 lwenziwa ngabantu abayi-100,000.
Njengotshintsho lwedijithali iyayiguqula indlela esisebenza ngayo, kwaye iiyure zeofisi eziqhelekileyo zisiba yinto yexesha elidlulileyo, iingcali zezimali zichonge awona mazwe angcono kwihlabathi ukuba ngumsebenzi osebenza ngokuzimeleyo.
Ukuqhuba uphononongo, amazwe anikwe amanqaku aqhelekileyo kwi-10 kwinto nganye, kubandakanywa isantya sebroadband, iindleko zokuphila, amandla wamalungelo omthetho wabasebenzi, isalathiso solonwabo kunye nokufumaneka kweendawo zokusebenzisana.
Amazwe ali-10 agqwesileyo ukuze ube ngumsebenzi ozimele:
Uhlu Igama lelizwe Izantya zeBroadband kaJulayi 2021 (Mbps) Iindleko zeBroadband ngenyanga ka-2020 (USD) Ukukhangela uMsebenzi oZisebenzelayo nge-100,000 nganye Amalungelo amiselwe ngokomthetho 2019 iGlobal Gender Gap Index 2020 Iindleko zokuphila ngoMntu ngamnye, ngenyanga (USD) INdawo zokuSebenza ngokubambisana kwi-100,000 nganye Happiness Index 2017-2019 Inqaku le-Freelancer
1 Singapho 256.03 33.43 1,058 8 0.724 971.09 2.32 6.377 7.35
2 Nyu Zilend 164.06 62.94 554 12 0.799 944.86 2.18 7.3 7.20
3 Speyin 187.88 43.43 689 5 0.795 719.37 1.58 6.401 6.53
4 Ostreliya 85.32 59.25 964 11 0.731 974.16 1.95 7.223 6.49
5 Dominikha 208.5 52.02 558 8 0.782 1,094.99 1.08 7.646 6.48
6 Khanada 174.53 76.14 649 9 0.772 889.2 1.56 7.232 6.45
7 Swizalend 214.82 69.37 672 6 0.779 1,586.17 2.50 7.56 6.36
8 Lithuwaniya 132.18 13.35 599 6 0.745 617.42 1.64 6.215 6.35
9 Swiden 163.31 48.4 379 7 0.82 953.14 1.23 7.363 6.34
10 Ayalend 116.19 48.55 616 7 0.798 979.52 1.71 7.094 6.27
Singapho ithatha indawo ephezulu njengeyona ndawo ilungileyo yokusebenza njengomntu osebenza ngokuzimeleyo ngo-2021, enamanqaku ayi-7.35. I-Singapore ixhamla kwi-broadband efikelelekayo zombini (i-$ 33.43 ngenyanga) kwaye ngokukhawuleza okukhulu (256.03 Mbps). Ilizwe lisebenza ngamandla kuyo yonke ibhodi, nangona ingeyiyo eyona ndawo inexabiso eliphantsi yokuhlala kwaye kusekho indawo yokuphucula ngokwemigaqo ye-Happiness Index yamanqaku.
edwin ndugire uthi:
Oktobha 28, 2021 kwi-09: 07
Ndijoyine kunye neqonga lakho lokubhala amanqaku. Ndingumbhali wenqaku olichule noneminyaka emithathu yamava ngegrama ekwinotshi ephezulu ngaphandle kokukopa.